खोप लगाएर चीनमा म ढुक्क भएँ, नआत्तिनुहोस् नेपालमा पनि आउँदै छ – साँचो खबर
खोप लगाएर चीनमा म ढुक्क भएँ, नआत्तिनुहोस् नेपालमा पनि आउँदै छ
डा. विकास राई, भर्खरै बेलायतले कोरोनाविरुद्धको खोप सार्वजनिक गरेपछि विश्वमा नयाँ आशाको दियो बलेको छ। झण्डै एक वर्षदेखि विश्वलाई हाराबारा बनाइरहेको कोरोना महामारी सय वर्षयताकै ठूलो संकट बनेको कुरा विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले बताइरहेका छन्। सन् १९४९ अक्टोबर १ मा नयाँ चीन स्थापना भएपछि देखापरेको सबैभन्दा ठूलो संकट भनेर राष्ट्रपति सी चिनफिङले सार्वजनिक समारोहहरूमा भनिरहेका छन्।
म त कोरोनाविरुद्ध खोप लगाएर ढुक्क भएको छु। तर मेरो मातृभूमि नेपालका नागरिक (नेपाली) कोरोना महामारीको भेलमा छन्। तसर्थ म सबैलाई भन्न चाहन्छु- नआत्तिनुहोस् खोप चाँडै आउँदै छ। नेपाल खबरबाट साभार
Previous: बेलायती राजकुमार दम्पती रेलयात्रामा निस्किए !
Next: श्रीकृष्णकी श्रीमती नायिका श्वेता खड्काले भोली विवाह गर्दै